Top Dhageyso: Musharrixiin Kalsoonida Kala Laabtay Guddiga Doorashada Jubbaland | Saadaal Media
Jul 19, 2019 - jawaab
Iyadoo maalinkii khamiista ee shalay guddiga doorashada madaxtinimada Jubbaland ay soo saareen shuruudo adag oo la hor-dhigay Musharixiinta Madaxweynaha Jubbaland ayaa qaar ka mid ah musharixinta waxaa ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen Guddiga doorashada.
Musharrixiintani oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ay sheegeen in hebi ahaanba aysan kalsooni ku qabin Guddiga doorashada Jubbaland,isla markaana ay yihiin kuwo ol ole u wada Madaxweynaha Jubbaland.
Pro Cabdiraxmaan Daqarre oo ka mid ah Musharixiinta isbeddel doonka waxaa uu tilmaamay inay kalsoonidii kala laabteen Guddiga doorashada Jubbaland,isla markaana hadii doorasho ka dhacdo jubbaland natiijadii kazoo baxda aysan aqbali doonin.
Waxaa uu ku eedeeyay guddiga doorashada Jubbaland inay hareer mareen habraaca doorashada,isla markaan aay waajib aheyd inayt kor joogto ka noqdaan waxa ka socda Kismaayo Xubno ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Musharrixiintani oo tartanka doorashada madaxtinimada Jubbaland isku diyaarinaya waxaa ku jira rag wasiirro iyo xildhibaanno ka ah dowladda dhexe iyo wasiirkii hore ee warfaafinta iyo isgaarsiinta xukuumadda Shirdoon Saacid, mudane Cabdullaahi Xirsi Ciilmooge.